Abaalmarinta 2019 Geospatial World Leadership ayaa lagu dhawaaqay, kaas oo lagu bixin doono GWF - Geofumadas
26 Maarso 2019: Warbaahinta Geeyska iyo Isgaadhsiinta ayaa ku dhawaaqay guuleystayaasha Abaalmarinta Hogaaminta Dunida ee 2019, taas oo ujeeddo u tahay inay u hambalyeeyo hoggaamiyeyaasha warshad casriga ah ee soo bandhigay naqshad ahaan aagagga ay ka shaqeeyaan oo si wayn u saameeyeen suuqii hore. Magacyada la soo xulay waxaa soo xushay guddi sare oo madax-bannaan oo uu hoggaaminayey Greg Scott, La-taliyaha Interpeace ee ku saabsan Maareynta Macluumaadka Global Geospatial.
ka Abaalmarinta Hogaaminta Dunida ee 2019 Abriil 2 ayaa la bixin doonaa inta lagu jiro Cashada Gala Forum Geospatial World, ee Taets Art iyo Event Park, Amsterdam - Zaandam, Netherlands.
Waa kuwan qaybaha abaalmarinta iyo liiska guusha:
Abaalmarinta Heerka Nolosha - Mudane Dr. Khalifa Al Romaithi
Lt Gen (Retd) Dr. Khalifa Al Romaithi wuxuu door muhiim ah ka qaatay hormarinta xirfadda geospatial-ka Bariga Dhexe waxaana loo arkaa inuu yahay «Aabaha Jaaliyada Gobollada»Imaaraadka Carabta iyo gobolka. Markii uu ahaa madaxa Sahanka Sahanka Militariga, waxay ahayd hogaankiisa fududeynta aasaaska NSDI ee UAE; Thanks to dhiirigelinta iyo taageerada waxqabadka isku midka ah ee gobolka tan iyo 2004. Aqoonsiga qiimaha sii kordhaya iyo baahida loo qabo macluumaadka geospatial ee maamulka iyo horumarka, Dr. Khalifa wuxuu difaacay jiritaanka xogta geospatial iyada oo loo marayo ururada rayidka sida Bayanat LLC. Hay'adda dhulka ee Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale lagu aasaasay hoos imaadkiisa, kaas oo si weyn u dhiirrigeliyay arrimaha kaabayaasha iyo siyaasadaha meelaha bannaan ee gobolka. Intii uu ku gudajiray howshiisa abuurida xarumo, Dr. Khalifa wuxuu siiyay hogaan sida Madaxweynaha Xarunta Aqoonsiga Space, oo ah hay'ad mas'uul ka ah sameynta codsiyada booska ee horumarka iyo amniga.
Danjiraha Geosafka ee Sanadka - Keith Masback
Keith Masback, oo hore u ahaa milatariga Maraykanka UU., Waa hay'ad caalami ah oo caalami ah oo ku saabsan sirdoonka juqraafi iyo illaa dhowaantiina wuxuu ahaa Agaasimaha Fulinta ee Hay'adda Sirdoonka Maraykanka ee Geospatial Intelligence of the United States. Sanado badan, wuxuu hoggaamiyey USGIF ka hor doorashadiisa isaga oo kor u qaadaya ganacsiga jagooyinka si loo hormariyo bulshada xooggan ee GEOINT ka dhex ah dawladda, warshadaha, akadeemiyadda, ururada xirfadlayaasha iyo muwaadiniinta. Masato wuxuu ahaa safiir dhab ah oo ku saabsan tiknoolijiyada geospatial, oo ka shaqeynaya jiilka soo socda iyada oo loo marayo barnaamijyo kala duwan oo diiradda saaray dhisida aasaas adag ee waxbarashada juquraafiyadda ee jaamacadaha Maraykanka.
Hoggaamiyaha Ganacsiga Gobollada ee sannadka - Jeff Glueck
Jeff Glueck wuxuu ahaa qalab wax ku ool ah oo ku saabsan isbedelka Foursquare waqtiyadii dhowaa. Sida hoggaankiisa, Foursquare waxay soo bandhigtay muuqaalkeeda codsigii macaamilka ah ee la iloobay si uu u noqdo mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee sirdoonka goobta, taas oo caawisa alaabooyinka la helo, diro farriimo iyo cabiraan macaamiishooda. Tiknoolajiyada Foursquare waxay bixisaa xogta goobta Apple, Uber, Twitter, Microsoft, Samsung iyo kuwa kale ee horumariya 150,000.
Sayniska Sanadka - Dr. James Crawford
Khabiirka in nidaamka sirdoonka iyo meel macmal ah, Dr. James Crawford isticmaali uu khibrad dheer u shaqeeya NASA si uu u hoggaamiyo aasaaskii Orbital Aragti in 2013 marka ganacsi ee meel dhulka dhawrid weli on cusp of a marxalad cusub. Waxa uu ahaa horyaal ah ee ka faa'iidaysiga awoodda sirdoonka macmal ah si loo abuuro nidaam cusub oo macluumaad aan ollogga ah in la fahmo iyo sifaha Earth dhaqaale dhawrid at ujeedooyin qiyaasta caalamiga ah, gobol iyo hyperlocal.
Sannad-guurada Haweeneyda Joogta ah - Ingrid Vanden Berghe
Ingrid Vanden Berghe waa hogaamiyaha fulinta GIS ee Belgium. Berghe ayaa sidoo kale horseeday fulinta sharciga Yurub ee daraasaadka saamaynta deegaanka. Intii uu mustaqbalkiisa xilal kala duwan, inta badan in qaar ka mid ah jagooyinka muhiimka ah oo duurka ku geospatial dowladda ee Belgium, Ingrid ayaa u doode aan laga daalin of technology hagaajinta ee bulshada in ay dalka iyo gobolkaba Flanders
Sameeynta Siyaasadda Bulshada & Kaabayaasha - Machadka Macluumaadka Gobollada Itoobiya
Qaybta juqraafiyadeed ee Itoobiyaanka ah ayaa kordhay wakhtiyada; Hoggaankani waa Machadka Macluumaadka Geospatial ee Itoobiya. Sidaas darteed of dib u habaynta dhismaha ah, ururka waxaa la abuuray October 2018 by awoodaha iyo waajibaadka shirka Hay'adda Sirdoonka Geospatial iyo in Information Agency Ammaanka Networks, si ay u taageeraan ajandaha koritaanka iyo isbedelka ah ee dalka iyada oo la bixinayo macluumaad tayo geospatial in saamilayda la xilkiisa ka mid ah si ay u hirgeliyaan Nidaamka macluumaadka Qaranka iyo Space Technology, machadka ayaa hore u ururinayaa oo la data photogrammetric GSD% 43 ded badan oo mass ee Itoobiya oo soo saaray maps Jooloojiyadda, mawduucyada iyo cadastaroolka. Intaa waxaa dheer in ay aragti ah ee la-hawlgalayaasha caalamiga ah ka shaqeeya si ay u horumariyaan awoodda farsamo, hirgelinta sarrifka Geoportal adeegga macluumaadka aan ollogga qaranka maalin saacadaha 24, todoba maalmood todobaadkii si ay u sameeyaan xogta juquraafi ahaaneed ee dalka u furan yihiin iyo sida bilaashka ah.
Machadka Cilmi-baadhista Geophatial ee Sanadka - Machadka Royal Melbourne Institute of Technology
Machadka Royal Melbourne ee Teknoolajiyada ayaa taageeray horumarinta sayniska juquraafiyadda adigoo maadadaas ku daraya manhaj badan. Its boorish gaarka ah ee aragtida ad-da'ayeen iyo barnaamijka xisaabta, iyo firfircoon oo cusub soo jiidan daraasiin ardayda sanad walba, ka caawiyay in ay curiyaan u tababaran ee warshadaha ee. Waxaa intaa dheer, machadku wuxuu aaminsan yahay in kala duwanaanshuhu yahay hannaanka tayada ee tayada waa tusaalayaal iyo muuqaalkiisa cilmi baaris iyo tayo sare leh.
Bilowga Goobaha Sannadka - ImGeospatial
IMGeospatial waxay ka faa'iideysanaysaa sirta farsamaysan iyo feejignaanta fog iyo macluumaadka ku saleysan goobta ku yaal hab gaar ah oo lagu soo saaro sirta faa'idada leh ee ganacsiyada. dhawr sano ee jiritaankeeda ka dib markii, shirkadda ayaa hore u shaqeeyay iyo xal la siiyo hay'adaha aqoonsan yahay, sida Baanka Adduunka, Hay'adda Space Yurub, xidhiidh buuna Biyaha iyo Agency Space UK. Xitaa sida xawaaladaha a bootstrapped aan maalgashiga VC, IMGeospatial haboon badan oo warshadaha in ay bixiyaan xal fudud, laakiin wax ku ool ah in la yareeyo kharashka iyo mudada mashruuca.
About ku saabsan Forum Geospatial World: World Geospatial Forum wuxuu ka dhici doonaa 2 ilaa 4 bisha April ee Amsterdam. Munaasabaddani waa mashruuc wada-shaqayn iyo is-dhexgal, kaas oo muujinaya aragti wadajir ah oo la wadaago beesha caalamka ee juqraafiyeed. Waa shir sannadeed oo ka mid ah xirfadlayaasha geospatial iyo hoggaamiyeyaasha wakiil ka ah dhammaan habka deegaanka deegaanka. Waxaa ka mid ah siyaasadda guud, hay'adaha khariidaynta qaranka, ganacsatada gaarka ah, ururrada dhinacyada badan iyo horumarinta, hay'adaha cilmiga iyo tacliinta iyo, dhammaan ayuu ka sarreeyaa, dadka isticmaala dhamaadka dawladda, shirkadaha iyo adeegyada la siiyo muwaadiniinta.
Su'aalo dheeraad ah kala soo xiriir Anusuya Datta, Tifatiraha Fulinta, Warbaahinta iyo Isgaarsiinta Dadweynaha, Warbaahinta Geospatial iyo Isgaarsiinta Anusuya@geospatialmedia.net Nagala soo xiriir - + 91 9999108798
Post Previous«Previous #GeospatialByDefault - 2019 Forum Geospatial Forum
Post Next Barnaamijka AEC ee xiga iyo barnaamijka SPAR 3D 2019 ee la soo bandhigayNext »